Ndị nọọsụ Izu 2013: Ọkachamara Na-eme Ka Mkpa Ọha - Ụwa 2022
Ndị nọọsụ Izu 2013: Ọkachamara Na-eme Ka Mkpa Ọha
Dị ka ụwa na-achọ ọtụtụ ọgwụ ọgbara ọhụrụ, ndị nọọsụ nke ọpụrụiche niile na-aghọ ebe ahụmịhe anyị na usoro nlekọta ahụike, site n'ọgbọ agha Middle Eastern ruo n'ụlọ ọrụ dọkịta mpaghara.
Na Mọnde, Òtù Na-ahụ Maka Ndị Nọọsụ America na-adọta uche n'ọhịa, yana ụfọdụ n'ime ihe ịma aka ndị dị n'ihu, na mmalite nke “izu ndị nọọsụ” kwa afọ, bụ nke mechiri May 12 na ụbọchị ọmụmụ nke Florence Nightingale, onye guzobere nọọsụ ọgbara ọhụrụ..
Ndị inyom ka na-achịkwa (mana, dịka ọmụmaatụ, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nọọsụ US Army ugbu a bụ nwoke), ọrụ ahụ na-agba ọsọ site n'aka ndị nọọsụ nwere ikike, na otu afọ nke ọzụzụ, nye ndị nwere nke ọ bụla n'ime akara akara abụọ, dọkịta. omume nọọsụ - ma ọ bụ Ph.D. na nọọsụ maka ndị nchọpụta.
Ụkọ ndị nọọsụ na-abịa
Ndị ọkachamara dọrọ aka ná ntị ihe karịrị afọ 10 gara aga banyere nsogbu na-abịa na nọọsụ, nke America na-enweta ma mmụba na-arị elu nke ndị nọọsụ site na ọnụ ọgụgụ ndị agadi na ụkọ ọtụtụ ndị lara ezumike nka, ndị nọọsụ ole na ole dochie anya ka ụlọ akwụkwọ na-achọsi ike imeju ọkwa ngalaba.
Carole Stacy, onye isi Michigan Center for Nursing, gwara ndị mgbasa ozi, "Anyị nwere ndị ọrụ nọọsụ merela agadi na ngalaba nọọsụ anyị emeela agadi." "Ihe m na-anụ ugbu a na akụ na ụba na-akawanye mma, bụ na ndị nọọsụ kwụsịrị ịla ezumike nká na-ekwu na ha ga-ala ezumike nká. N'ihe dị ka afọ abụọ, anyị ga-ahụ ụkọ."
Nnyocha 2010 nke Center for Nursing chọpụtara na ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nọọsụ debanyere aha dị afọ 55 ma ọ bụ karịa, yana pasent 43 nke ndị nọọsụ nwere ikike dị ka agadi. Na dị ka ndị nọọsụ nọ n'afọ, ụlọ akwụkwọ ndị nọọsụ na-aga n'ihu na-achụpụ ụmụ akwụkwọ ruru eru site na afọ anọ na mmemme nọọsụ gụsịrị akwụkwọ maka enweghị ngalaba, ụlọ ọgwụ na ohere klaasị, na ego.
Ndị otu American Association of Colleges of Nursing kwuru na ụlọ akwụkwọ jụrụ 75,000 ndị ruru eru sitere na mmemme dị otú ahụ na 2011 maka ebumnuche ndị ahụ, dịka ụkọ ahụ na-ada. Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ na-ekwu na ndị ọrụ America ga-achọ ihe dị ka nde ndị nọọsụ 3.45 na 2020, site na nde 2.74 na 2010 - jikọtara ọnụ na mmụba nke ndị agadi sitere na nde 40 ruo nde 55 n'oge ahụ.
Ọ bụ ezie na ndị agadi nwere pasent 13 nke ndị US na 2008, ndị mmadụ 65 gbagoro gbagoro ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọpụpụ ụlọ ọgwụ.
Debra Nault, onye isi ọrụ nọọsụ maka Michigan Nurses Association, kwuru na nsogbu dị na agụmakwụkwọ nọọsụ - yana n'ime ọrụ ahụ, gbasara ụfọdụ ọpụrụiche - enwere ike ịpụta na mkpali ego. N'ụlọ ọgwụ dị na Michigan, otu n'ime steeti ndị emetụtara, onye nọọsụ nwere ahụmahụ nwere ike irite $80,000 kwa afọ, ebe ọkwá baccalaureate, na-achọkarị akara ugo mmụta nna ukwu, ga-akwụ otu ụzọ n'ụzọ anọ.
"Pay n'ezie bụ nnukwu okwu," Nault kwuru. "Ụgwọ a abụghị n'ezie ihe ị ga-enweta n'ụlọ ọgwụ."
Akwụkwọ akụkọ American Journal of Medical Quality na Jenụwarị gara aga buru amụma na ụkọ ndị nọọsụ debara aha ga-akacha njọ na South na West nke United States, ebe mba ahụ na-aga n'ihu na-ewepụ ndị nọọsụ, n'aka nke ya, site na mba ndị ka na-emepe emepe na-enye obere ụgwọ ọnwa.
Nkwalite ndị nọọsụ
Dị ka America na-echeta ọrụ malitere n'oge a na Nightingale's etiti 19th ọrụ narị afọ na Agha Crimea, Òtù Na-ahụ Maka Ndị Nọọsụ America rịọrọ ndị ọzọ ka ha "sọpụrụ ndị na-arụsi ọrụ ike, na-enwekarị ihe onwunwe ole na ole na obere ezumike, iji nyere anyị aka ịnọgide na-ahụ ike anyị."
Òtù Na-ahụ Maka Ndị Nọọsụ America na-agba ndị mmadụ ume ka ha na gọọmentị obodo na-ekwurịta banyere àgwà nlekọta ahụike na obodo ha, na maka ndị na-eche echiche ka ha mee ememe pụrụ iche iji mata ndị nọọsụ na obodo, na-ede akwụkwọ ozi nchịkọta akụkọ na akwụkwọ akụkọ mpaghara, kwa.
Dị ka akụkụ nke mgbalị sara mbara iji kpalie ọgbọ ndị nọọsụ na-esote, Nurses.com n'izu a wepụtara akwụkwọ eletrọnịkị efu nke nwere nchịkọta akụkọ 30, nke ndị nọọsụ dere banyere ahụmahụ ha na ọrụ ahụ: "Njedebe nke Shift: A Treasury of Real Akụkọ sitere na ezigbo ndị nọọsụ." Mbipụta a ga-adị n'ime izu na Nurse.com dịka nbudata n'efu na e-agụ na ụdị PDF.
Achọpụtara ndị na-eguzogide COVID ka ha bụ isi n'ọgụ megide ọrịa na-efe efe
Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-amụba ọrụ nke otu ndị achọpụtara na ha na-eguzogide SARS-CoV-2 na ọgụ megide COVID-19
Kedu ihe kacha mma ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka ndị nnata Janssen?
Enwere ihe akaebe na ndị na-anata ọgwụ mgbochi J&J ga-erite uru karịa site na ntinye nkwalite sitere na Moderna na Pfizer